Tibushi Gardens, 1 Bedr. Ifanele i-Pool - I-Airbnb
Tibushi Gardens, 1 Bedr. Ifanele i-Pool
Ifulethi elisha eli-1 Bedroom elinephuli, elitholakala imizuzu emi-2 ukushayela ukusuka emabhishi aphezulu e-Aruba, indawo yokudlela, ukuyothenga, amakhasino kanye ne-Golf Course. Itholakala endaweni ethule kakhulu nephephile, uzothola igumbi lesimanjemanje, indlu yokugezela, ikhishi negumbi lokuhlala eline-Wi-Fi yamahhala nendawo yokupaka.
Siyakwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya.
Uma ufuna indawo yokuhlala engabizi kakhulu endaweni ethule nenhle, khona-ke iTibushi Gardens yilokho okufunayo.
I-Tibushi Gardens iyindawo ekahle yokubaleka, iseduze kakhulu namabhishi nokho ikude kakhulu nakho konke ukuphithizela kwedolobha.
• Ifulethi elisha elibanzi elingu-475 sqft elinendawo yokungena yangasese
• Igumbi lokulala elihlukile elinombhede olingana nendlovukazi
• Igumbi lokugezela elinamanzi afudumele
• Ikhabethe elivulekile
• Ikhishi elifakwe ngokugcwele
• Ivulandi eline-BBQ.
• I-TV ye-Flatscreen egumbini lokuhlala negumbi lokulala (kufakwe i-Netflix nekhebula le-TV)
• I-Wi-Fi yamahhala yesivinini esikhulu
• Indawo yokupaka mahhala
• Amathawula olwandle, isambulela esipholile kanye nesambulela solwandle ukuze kube lula kuwe.
• Kunesitolo esikhulu phakathi kwemizuzu emi-2 ukushayela
ITibushi Gardens itholakala eduze kwaseMalmok. Iyindawo enokuthula nephephile emizuzwini nje embalwa ukusuka ogwini olusenyakatho-ntshonalanga, olunolwandle oluhle kakhulu lwase-Aruba olunesihlabathi esimhlophe elizungezwe amanzi aluhlaza acwebile. Ukudla, ukuyothenga, amakhasino kanye nokuphila kwasebusuku kutholakala nje imizuzu emi-2-5 uma ushayela.
Sikhuluma isiNgisi, iSpanishi, isiDashi nesiPapiamento.
Ungaxhumana nathi ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb. Esimeni esiphuthumayo, ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi, siyatholakala 24/7.
Imibuzo, izicelo noma imibono, sicela ukhululeke ukusibuza.
Ungaxhumana nathi ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb. Esimeni esiphuthumayo, ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikh…